Kônsily voalohany tao Kônstantinôpôly - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Konsily voalohany tao Konstantinopoly)
Ny Kônsily voalohany tao Kônstantinôpôly na Konsily voalohany tao Kônstantinoôpla dia kônsily ekiomenika faharoa nataon' ny Fiangonana kristiana taorian' ny Kônsily voalohany tao Nikea. Nanamafisana ny zavatra tapaka tao amin' ny Kôsilin' i Nikea io kônsily io izay nanalavana ny Fanekem-pinoana nikeana ka lasa Fanekem-pinoan' i Nikea sy Kônstantinôpôly. Ny emperora Teôdôsio I no mampanao azy tamin' izany. Io kônsily io dia nanameloka ny fampianaran' i Makedônikôsy sy ireo pneomatômaka izay nanda ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina. Nohamafisiny ny maha Andriamanitra an' i Kristy sady nambarany fa Andriamanitra koa ny Fanahy Masina ary noraiketiny ilay fanekem-pinoana natao tamin'ny kônsily voalohany tao Nikea. Io kônsily io koa no nanome fahamboniana fara tampony ny evekan' i Rôma sy ny an' i Kônstantinôpôly amin' ny eveka rehetra. Tapaka fa Andriamanitra koa ny Fanahy Masina. Tsy nandray anjara tamin' io ny Fiangonana latina.
Fanekem-pinoanan' i Nikea sy KônstantinôpôlyHanova
Ny Fanekem-pinoan'i Nikea sy Kônstantinôply na Fanekem-pinoana nikeana-kônstantinôpôlitana dia fanambaràm-pinoana kristiana tinapaka nandritra ny Kônsily voalohany tao Kônstantinôpôly izay fanitarana ny fanekem-pinoanatao notapahina tamin' ny kônsily voalohany tao Nikea. Manamafy ny maha Zanak' Andriamanitra sy ny maha Andriamanitra an' i Jesoa Kristy io fanekam-pinoana io. Hamafisiny koa ny maha Adriamanitra ny Fanahy Masina nefa tsy Andriamanitra maro izany fa Andriamanitra tokana. Izany dia entina hamaritra ny finoana ny maha Telo Izay Iray na Trinite an' Andriamanitra.
Ity ilay fanekem-pinoana:
Isika mino an’Andriamanitra Tokana, Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita.
Sy an’i Jesosy Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noarina; miray sobstansa amin’ny Ray; amin’ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny Fanahy Masina tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany.
Sy ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany;
Ary mino koa ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amena.
Kônsily faharoa tao Kônstantinôpôly
Kônsily fahatelo tao Kônstantinôpôly
Kônsily fahefatra tao Kônstantinôpôly
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kônsily_voalohany_tao_Kônstantinôpôly&oldid=1012111"
Dernière modification le 24 Mey 2021, à 12:26
Voaova farany tamin'ny 24 Mey 2021 amin'ny 12:26 ity pejy ity.